Bitcoin ọnụahịa nke ahia taa na akụkọ ihe mere eme nke Bitcoin ka ọ bụ malite na mmalite ụbọchị nke ahia na ahịa mkpuchi ego dijitalụ.
Ogologo ahia nke taa maka Bitcoin bụ 0 US dollar .
Bitcoin isi okwu ahịa na dollar taa. A na-agbakọ atụmatụ capitalization dabere na mgbanwe mgbanwe ego ego gburugburu ụwa site na Bitcoin Ozi maka okpu Bitcoin bụ maka naanị akwụkwọ. Bitcoin okpu ahịa mụbara site na $ 0.
Bitcoin ibu nke ahia
Taa Bitcoin volum nke ahia bụ 0 dollar US .
Bitcoin olu ahia taa - 0 dollar US. Gburugburu azụmaahịa maka Bitcoin dị na weebụsaịtị anyị. Bitcoin ịzụ ahịa n'oge a na-eme n'ọtụtụ mgbanwe ego ego, weebụsaịtị anyị na-egosi olu azụmaahịa kwa ụbọchị nke Bitcoin. Bitcoin isi ọrụ nchịkwa abawanyela ma echi ụnyaahụ.
Bitcoin ahịa kaadị
Mgbanwe ahụ dị na Bitcoin isi okwu kwa izu bụ 0%. 0% - mgbanwe na isi ahịa ahịa nke Bitcoin kwa ọnwa. N'ime afọ gara aga, Bitcoin capitalization agbanweela site na 0%. Taa, Bitcoin isi okwu nha nha isi 0 dollar US.
Bitcoin mpịakọta chaatị